SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Guraandhala 6, 2019 – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooSBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Guraandhala 6, 2019
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Guraandhala 6, 2019
SBO GURRAANDHALA 06, 2019. Oduu, Ajjechaa Godina Jimmaa Ona Limmuu Kossaatti Qeerroo Awwal Abbaa Biyyaa irratti raawwatame irratti gaaffii fi deebii akkasumas gaaffii fi deebii Ajajaan WBO Godina Lixaa Jaal Kumsaa Dirribaa VOA Afaan Oromoo walin godhe.
Karaa nagaa fi araaraa shiraan danquuf tattaafatuun eessanuu nama hin gahu.
Ibsa Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) irraa kenname
Guraandhala 5, 2019
Mootummaan Abiyyi karaa araaraa fi nagaa Oromoon hawwu karaa adda addaatin danqaa itti ta’aa jira.Guyyaa araarri magaalaa Ambootti gaafa 24/01/2019 labsame galgalee waraanni ittisa biyyaa ajaja lafa jalaatiin qajeellfame zoonii kibba oromiyaa godiina Gujii Lixaa fi Bahaa itti ummataa Oromoo fi WBO irratti lola bali’aa bane, lola hanga guyyaa har’aa itti gaggeeffameenis lubbuu fi qabeenya irratti gaagga’ama guddaa fidee jira. Sabboontota Oromoo, deggertoota, fi akka walii gala itti uummata godiinalee lameen keessa jiraatan jiruu fi jireenya isaanii burjajjessuun, hidhuu, fi ajjeesuun itti fufee jira. Olola rakashaa fi maqi xureesssuu duraanu barame itti fufuun #WBO irratti diinummaa isaanii karaa jala deemtota qopheeffataniin ifatti gaggeessaa jiru.
Akka walii gala itti duula waraanaa fi olola bal’aa sadarkkaa adda addaa itti baname kanas bifa fedhuun milkaa’uu hindandeenye. Waraanni mootummaa bakka maqaa sakata’an bobba’e cufatti carraan guyyuu isa mudatu akka baalaa harc’uu ta’ee jira. Gama kanaan milkaa’uu dhabanii uummta keessaa kaan dirqisiisuun kaan ammo maallaqaan bituun uffata uniform itti uffisuun kijiba “…WBO waamicha Abbaa Gadaa dhaga’ee gale…” jechuun ijibbaata ololaa oofaa jiru. Bakkoota kaanittis ammo yaalii WBO uummataa waliin wal dhabsiisuuf namoota bitaniin rifeensa fi uffata WBO fakkaatu itti tolchanii yakka akka mootummaa haa turu qaama gaafatama qabu tokko irraa hin eegamne guyyaa adii raawwataa jiru. Ololli Gujii lixaatti WBO irratti deemaa jiru guyyaa guyyaan bifa jijjiirataa deemuun “Alshabaab Gujii lixaa seenee jira” jechuun maqaa nu xureessuun uummata keenya biratti jibisiisuuf uummata gura duuchaa jiru. H/D ABO Dawud Ibsaa WBOn Bahaa fi Dhi’a Gujii itti argamu “waraanna kiyyaa mitii jedhe ” jechuun karaa A/Gadaa Jiloo madhoo seeraa fi safuu, kabajaa fi ulfina sirna Gadaa bifa xureessun socho’aa jiru.
Sirni gadaa oromota Gujii durii irraa eegale sirna dhiibbaa, hacuucaa fi badii irraa dhorkee kabajaan dhaloota har’aa dhaqqabsiise dha . Sirni gadaa Gujii utuu kana ta’ee jiruu A/Gadaa Jiloo Madhoo hojii akkasii maqaa abbaa gadaatiin dalaguun nama qaanessa, maqaa abbaa gada Oromoo fi addunyaa biratti beekame illee xiqqeessa. ABO fi WBO kabajaa fi ulfina guddaa A/Gadaaf qabnu hubachiisaa, sirni gadaas bifuma kanaan dura saba keenya kabjchiisaa fi ulfina kennaa ture ammas itti fufiinsaan akka dhaloota itti darbutti hojjachuuf dhaabbanna. Kanaafis imaanaa uummanni Oromoo Gujii A/Gadaa Jilo Madhooitti kenne akka kabajan jabeessinee dhaammataa, jecha kanas qajeelfatan ijaraa nu hambisaa jennaan. Olola diigumsaa mootummaan kun oofufis karaa waan saaqeef qajeeluu qabaa jenna. Ummanni keennaas ololoota WBO irratti oofamaa jiran kun olola ta’uu hubachuun gura akka hin ergifinneef dhaamana.
Tiruun bubulte hiddaa taati jedhama . Shiraa fi hammeenyummaa WBO irratti deemu kun shira uummata Oromoo irratti dalagamaa akka ta’e ifa dha. Kanaaf gochaa kana dhaabsiisuu fi egeree Oromoo murteessuun ummata Oromoof kan yeroon itti hin laatamne ta’uu hubatanii tokkummaa dhaan mootummaa nagaa fi araara afaanii faarsaa gochaan ammoo isuma kaleessaa raawwataa jiru kana dura dhaabbachuun WBO cinaa dhaabatanii araara qajeelaa fi nagaa waaraa fiduuf qabsoo bifa maraan akka finiinsitan dhaammana!
A/WBO zoonii kibbaa irraa
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Guraandhala 10, 2019
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Guraandhala 10, 2019 SBO GURRAANDHALA 10, 2019. Oduu fi Gaaffii fi…
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Guraandhala 8, 2019
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Guraandhala 8, 2019 SBO GURRAANDHALA 08, 2019. Oduu fi Gujii Bahaa…
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Guraandhala 3, 2019
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Guraandhala 3, 2019 SBO GURRAANDHALA 03,2019. Oduu, Alaabaan ABO Godina Iluu…